Andian-tsarimihetsika China HGM no nanetsika ny famokarana sy ny famokarana koba | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
ZG feeder mampihetsi-po
K series mamelona mpamahana saribao
HGM andiany miompana feeder saribao
Feeder hovitrovitra elektromagnetika
Czg feeder mihombo avo roa heny
Feeder kapila habetsahan'ny CypB
Ny vatan'ny mpampihinana arina varotra mihetsika dia voaisy tombo-kase ary mifandray amin'ny fanokafana ambany ny silo. Ny karazana andohalambo na ny lovia fanaingoana modely ao amin'ilay masinina dia mifandray mivantana amin'ireo fitaovana ao anaty fitoeram-bokatra boribory.
Ny vatan'ny mpampihinana arina varotra mihetsika dia voaisy tombo-kase ary mifandray amin'ny fanokafana ambany ny silo. Ny karazana andohalambo na ny lovia famoahana modely ao amin'ilay masinina dia mifandray mivantana amin'ireo fitaovana ao anaty fitoeram-bokatra boribory. Ny hovitrovitra amin'ny takelaka fanesorana dia ampitaina amin'ny fomba mahomby amin'ny fitaovana voatahiry ao anaty silo. Ny angovo mihozongozona ateraky ny hery hovitrovitra dia mahatonga ny fitaovana hilatsaka sy hianjera. Ny fitaovana dia ampitaina amin'ny fivoahan'ny arina ambany amin'ny alàlan'ny lalan-drivotra miolakolaka amin'ny andaniny roa amin'ny mpamatsy arina. Ny hovitrovitra avy amin'ny mpamatsy arina sy ny làlan-drivotra natao manokana ary nikajiana dia nahatonga ny fitaovana tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiolahana mba hiantohana ny famoahana arina haingana sy maimaim-poana ny fitaovana, eny fa na dia ny arina misy viscosity avo sy votoatin'ny hamandoana be aza. Misy karazany roa ny famolavolana ny masinina: ny iray dia ny flap maimaimpoana azo ahodina tsy mihetsika, ary ny iray hafa dia ny karazana fanidiana mandeha ho azy. Ny teo aloha dia azo ampiasaina amin'ny fiasan'ny akora fametahana hamandoana be sy ny habetsahan'ny sakafo. Ny karazana fanidiana mandeha ho azy dia manana endrika famolavolana hentitra ho an'ny radius ambonin'ny boribory sy ny haben'ny poti-javatra: 200-1000MM boribory mihodinkodina, ary ny elanelana farany ambany misy eo anelanelan'ny hopper curve sy ny lozisialy arofanina dia 150-80 dia hidina ho azy ary hijanona tsy hikorisa, ary tsy ilaina ny mametraka vavahady.
Ny hovitrovitra mampatahotra dia fitsipika mahafinaritra. Ny masinina dia misy motera vibration, trough, cornel sns. Izy io dia mandray masaka roa heny eo akaikin'ny fitsipiky ny resonance, mampiasa lohataona fingotra handraisana hery, miasa tsara, manome hery mitovy ary tsy misy tabataba, ary mampihetsi-po ny hery manetsiketsika hamily ny vatany lehibe hahazoana ny amplitude linear ilaina. Ampiasaina amin'ny mpanova hatetika sy ny takelaka azo ovaina hydraulic, ny fivoahan'ny arintany dia azo ahena hatramin'ny faran'ny ambany indrindra hatramin'ny 120% amin'ny vokatra, mba hahatsapany ny fibaikoana haingana ny famahanana.
Ny toetra mampiavaka an'ity milina ity dia ny fahafahany mihinana mivantana rehefa tsy misy hovitrovitra mihombo, ary ny fahaiza-mitantana dia azo ampitomboina mihoatra ny 20% rehefa mihetsiketsika. Ankoatr'izay, rehefa aforitra eo afovoan'ny fehin-kibo ny seranan-tsambo, ny fehikibo dia tsy mora mivaona, tsy misy vovoka, tsy misy fanaparitahana sy fanoherana ny fiantraikany. Ny bunker arintany dia tsy mora sakanana sy arovana. Izy io dia azo antoka, fitsitsiana angovo, mahomby, miaraka amin'ny famatsiana arintany lehibe, fandotoana ambany ary androm-piainana maharitra. Izy io dia miaraka amin'ny fitaovana fanasitranana sy tsy fahampian-drano. Rehefa lehibe ny atin'ny hamandoan'ny fitaovana dia azo esorina ny rano ao anaty akora. Rehefa maina ny fitaovana dia azo ampiasaina ny fitaovana famafazana handefasana ilay lena mando, izay misy vovoka sy vovoka azo antoka ho an'ny vovoka, an'ny fitaovana fiarovana ny tontolo iainana.
Taham-pahanana arintany t / h
Habe famahanana mm
Previous: Feeder hovitrovitra elektromagnetika
Manaraka: K series mamelona mpamahana saribao
Mpihinana vainafo fehikibo
Mpihinan-tsakafo miolakolaka ho an'ny fitrandrahana
Mpihinana vainafo Impeller
K Type feeder arina
Mpamahana vainafo mifamaly
Mpihinana vainafo mihovotrovotra
Mpamatsy vainafo milanja
Fehikibo, mpamatsy rojo
Adiresy: ny faritra andrefan'ny lalana avaratra Taihang, faritra fampandrosoana ara-toekarena Xiaoji, tanàna xinxiang, faritanin'i henan.